Kadib markii Miiraan uu Reyan geeyay qasrigooda Aziiza Aslan Bey ma u ogolaan doontaa in gurigeeda ku noolaato maxayse Jonul sameyn doontaa? Iyo taxanaha Hercai qeybtiisa somaliga ku turjuman oo meel xiiso leh maraayo. | Filimside
Home ARRIMAHA BULSHADA Kadib markii Miiraan uu Reyan geeyay qasrigooda Aziiza Aslan Bey ma u...
ARRIMAHA BULSHADANolosha JilayaashaSHEEKADA FILIMADAWARARKA MAANTA
Kadib markii Miiraan uu Reyan geeyay qasrigooda Aziiza Aslan Bey ma u ogolaan doontaa in gurigeeda ku noolaato maxayse Jonul sameyn doontaa? Iyo taxanaha Hercai qeybtiisa somaliga ku turjuman oo meel xiiso leh maraayo.
Taxanaha Hercai oo dhawaan laga sii daayay kanaalka Turkiga ee ATV balse asigoo afsoomaali ku turjuman haatan ka socdo Astaan Drama ayaa meeshii ugu xiisaha badneyd maraya.
Sidaan wada ognahay Aziza Aslan Bey wey ka aarsatay reer Sadoglo iyadoo gabadhooda ku fadeexeysay deegaanka oo dhan sidoo kalana hantidooda wey la wareegtay waxaana u dhiman kaliya in qasrigooda la wareegto.
Hase yeeshee Miran wuxuu aad uga shaleynayaa dhibka uu u geystay Reyan iyo siduu u ceebeystay wuxuuna doonayaa in uu dhaawaca uu u geystay ka baabi’iyo sidaas owgeed wuxuu soo badbaadinaa nafteeda asigoona keenayo qasrigooda.
Azziza waa naag dhagar badan sidoo kalana caqli badan waxayna dadka kale markasta dheertahay iney tahay qof dagan waxbadana ka fikirta falka ay ku dhaqaaqeyso sidaas owgeed haatan ma dooneyso iney Meran is hor taagto dagaalna la gasho taas badalkeeda siduu rabo ayay u yeeleysaa mana kahor imaaneyso qorshaha Meran uu Reyan ku keenay qasrigooda waxayna Jonul u sheegeysaa in aysan faro gashan arimaha Meran.
Dhanka kale Meran wuxuu ogaanayaa in Azziza ay Reyan ku fadeexeysay magaalada oo dhan halka Reyyan ay ogaan doonto in naagta fadeexeysay ay Meran ayaydiisa tahay.
Arinta ugu qiirada badan waxay tahay marka ay Reyyan suuxdo oo uu Meran soo xambaaro qolkiisana geeyo asigoo sariirtiisa ku seexinaayo hadalada ay markaas dhaheyso Jonul taasoo aad uga cabaneyso in Meran uusan maalina sariirtaas iyada ku seexinin iyadoo xaaskiisa ah balse taas badalkeeda gabadha uu dhalay cadowgiisa ku seexiyay.
Waxayse xaalada kasii daree marka ay Jonul mindi qaadato misna dhuunta iska saarto iyaduu uu Meran ku leeyahay ha is dilin balse waxay ugu jawaabee muxuu yahay farqiga u dhaxeeyo inaad Reyyan inta keentid ama nolosha igu duugtid?
Previous articleQaabka ugu fudud ee timaha dhaqso kuugu tarmi karaan iyo macluumaad kale oo layaab leh.
Next articleMa rumeysan kartid fanaanada dhar dhigashada ku caanbaxday ee Nicky Minaj oo ugu dambeyn loo ogolaaday in ay sacuudiga Show ku qabato.